Ukubuyekezwa kweTangier Casino | Ibhonasi ka-R300 yamahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-tangiers casino
Isibuyekezo se-Tangiers Casino
Isofthiwe:Rival, Microgaming, VIVO Gaming, Betsoft
Ibhonasi Lokukwamukela:R450 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
750% Ibhonasi ne 110 Ama-Free Spins
Abadlali baseNingizimu Afrika bangakhetha okuningi ngo-2021 uma kuziwa ekukhetheni ikhasino ye-inthanethi! Yize kuyinto enhle ukwazi ukukhetha, kungaba nzima kubadlali baseNingizimu Afrika ukunquma ukuthi iyiphi ikhasino ye-inthanethi ebalungele. Lokhu kungenxa yokuthi amakhasino amaningi aseNingizimu Afrika anikela ngebhonasi yokukwamukela ekhangayo futhi athi angamakhasino ahamba phambili eNingizimu Afrika.
Kepha, kubalulekile ukwazi ukuhlunga imininingwane nezimangalo ezenziwe yikhasino ngayinye. Sithole ukuthi i-Tangiers Casino ilapho kanye namakhasino e-inthanethi angcono kakhulu eNingizimu Afrika futhi inesizathu esinhle sokuba yikhasino engcono! Ziyini izizathu zalokhu?
Uma uvakashela i-Tangiers Casino uzothola ikhasi lasekhaya elikhangayo elihle elinombala oklanywe kahle. Umbala ongemuva uyinhlanganisela eluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama okwenza ukuthi ilungele yonke imidlalo esele, kanye namaphromoshini kugqame. Abakhi benze isayithi yabalula kubadlali ukuze bathole kalula abakufunayo. I-Tangiers Casino inenqubomgomo esobala kakhulu eyenza kube lula ukuthola Imininingwane Ngekhasino, izindlela zokubhenka, amabhonasi, imigomo nemibandela, kanye nenqubomgomo yayo yokugembula okunomkhawulo.
Okuhlaba umxhwele nakakhulu ukuthi i-Tangiers Casino ineminyaka ecishe ibe ngu-20 isebenza. Ikhasino ithi inabadlali abangaphezu kwesigidi esisodwa ku-database yayo evela emhlabeni wonke. Lokhu nakanjani kufaka i-Tangiers Casino ezingeni eliphezulu ngoba amakhasino amaningi e-inthanethi athanda ukuvala ngokushesha ngoba awakwazi ukugcina abadlali bayo bejabulile noma ahlangabezane nobunzima bezezimali. I-Tangiers Casino iziphasile kahle zombili lezo zivivinyo futhi isizibonakalise njengekhasino ephephile, kanye nethembekile.
Futho le khasino ye-inthanethi inikela ngemidlalo evela kwabanye onjiniyela abaphezulu embonini, amabhonasi ahehayo, kanye nosizo lwamakhasimende oluthembekile!
Lapho abadlali baseNingizimu Afrika bethatha isinqumo sokukhetha ikhasino ye-inthanethi, lena eminye yemibuzo ejwayelekile kanye nokukhathazeka abanakho:
ingabe le khasino ye-inthanethi iyamukela anadlali avela eNingizimu Afrika?
Ingabe kuyofanele yini ngidiphozithe / ngikhiphe imali ngemali yakwamanye amazwe noma ngingakwazi ukusebenzisa i-ZAR?
Ingabe lena kuyikhasino ephephile, evikelekile nelayisensiwe?
Ungakhathazeki! Sinezimpendulo zonke ozifunayo ngalokhu
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Tangiers Casino
Amakhasino e-inthanethi abhekele iNingizimu Afrika ahlezi ezama ukwedlula amanye amakhasino ngamabhonasi awo okukwamukela ngoba bancintisana ngesabelo semakethe. Uzokuthola kunzima ukuthola ikhasino ye-inthanethi ebhekele iNingizimu Afrika engadlula ibhonasi yokukwamukela ye-Tangiers Casino.
Ibhonasi yokukwamukela isiyonke izobona abadlali bethola imali efika ku-750% kumadiphozithi abo amathathu okuqala, ama-spins amahhala angu-25 kanye nama-spin angasebenzisi imali angu-110. Nayi imininingwane:
200% Ibhonasi Yokukwamukela + ama-Spin Amahhala angu-30 Kudiphozithi Yokuqala
Ngenkathi iningi lamakhasino e-inthanethi enikela ngebhonasi elingana nediphozithi ka-100%, qala izinto ngebhonasi yokukwamukela ka-200% kanye nama-spins amahhala.
Ungathatha ibhonasi elingana nediphozithi ka-200% ize ifike ku-R24,000
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zingu-35x
Uthola ama-spin amahhala angu-30Ibhonasi ifakwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho
250% Ibhonasi Yokukwamukela + ama-Spin Amahhala angu-50 Kudiphozithi Yesibili
Idiphozithi yesibili ivame ukwehla kumakhasino e-inthanethi amaningi kodwa e-Tangiers Casino iba ngcono kakhulu.
Ungathatha ibhonasi elingana nediphozithi ka-250% ize ifike ku-R30,000
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zingu-35x kuphela
Uthola ama-spin amahhala angu-50
Ibhonasi ifakwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho
300% Ibhonasi Yokukwamukela + ama-Spin Amahhala angu-30 Kudiphozithi Yesithathu
Ungathatha ibhonasi elinganayo ehlaba umxhwele kakhulu kudiphozithi yakho yesithathu. Lokhu kufaka:
Ibhonasi elingana nediphozithi ka-300% ize ifike ku-R36,000
Uthola ama-spin amahhala angu-30
400% Ibhonasi Yokukwamukela ye-Bitcoin
I-Tangiers Casino ikhuthaza abadlali ukuthi basebenzise i-bitcoin njengendlela yabo yokubhenka. Abadlali abasebenzisa i-bitcoin bangathatha ibhonasi yokukwamukela enkulu kakhulu kumadiphozithi abo amathathu okuqala.
Thola ibhonasi ka-400% kumadiphozithi akho amathathu okuqala usebenzisa ama-bitcoins
Kudingeka inani eliphansi lediphozithi ye-bitcoin
Ayikho ikhodi yephromohini edingekayo
Amakhodi Amabhonasi Ediphozithi Engekho e-Tangiers Casino
Uma ubucabanga ukuthi ibhonasi enkulu elingana nediphozithi ka-750% kanye nama-spin amahhala angu-110 bekunganele, i-Tangiers Casino iphinde inikele ngo-R300 mahhala ungenzanga idiphozithi. Abadlali baseNingizimu Afrika bangasebenzisa lawa ma-spins amahhala ukuzama imidlalo ehlukile ngaphandle kokuchitha imali yangempela yabo.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Tangiers Casino
I-Tangiers Casino itotosa abadlali baseNingizimu Afrika ngokubanikeza amaphromoshini nsuku zonke. Abadlali bazokwazi ukukhetha noma iyiphi iphromoshini abayithandayo ngokuya ngosuku lwesonoto abadlali ngalo. Amaphromoshini abangawakhetha njengamanje abandakanya i-Magnificent Monday, i-High Stakes Tuesday, i-Wonder Wednesday, i-High Stakes Thursday, i-Full House Friday, i-Super Saturday kanye ne-Sunday Storm!
Ngaphandle kwalawa maphrromoshini ansuku zonke, i-Tangiers Casino iphinde ibe nemiqhudelwano yamasonto onke enikeza abadlali ithuba lokuwina inhlanganisela yemali yamahhala nama-spins amahhala. Eminye yemiqhudelwano yamanje ibandakanya i-Grand Slots Mania, i-Rush Reel A Rolex, i-Saturday Race Championship kanye ne-Grand VIP Tournament.
Kuphinde kube nokheshi obuyiselwa yona masonto onke ukuvumela abadlali babuyiselwe enye yemali abayilahlile!
Isiqiniseko Ukheshi Ubuyiselwa masonto Onke
Le phromoshini yokokubuyisela ukheshi masonto onke iyatholakala kubo bonke abadlali baseNingizimu Afrika
Ikhasino iqinisekisa u-15% wemali oyilahlekelwe ngesonto njengemali ebuyiselwayo
Abadlali kuzomele bashinthshise amaphoyinti okuthembeka abo bathathe ukheshi obuyiselwe
Ukheshi obuyiselwe ufakwa njalo ngoMsombuluko futhi ikhokhwa ngqo ku-akhawunti yakho
Abadlali kumele kungabi nemali abayikhiphile esontweni eledlule ukuze bafaneleke
Iphromoshini yokukubuyisela ukheshi masonto onke ingenye indlela i-Tangiers Casino evumela ngayo abadlali ukuthi bathole okungcono kakhulu ngemali yabo!
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Tangiers
Abanye abadlali badinwa yinqubo yokubhalisa etholakala kwamanye amakhasino e-inthanethi. Ngeke ube nezinkinga ezinjalo e-Tangiers Casino ngoba abaklami benze inqubo yaba lula. Akufanele kukuthathe ngaphezu kwemizuzu embalwa ukubhaliswa. Qinisekisa nje ukuthi unokuxhumeka okuzinzile kwe-inthanethi.
Lezi yizinto ozidingayo ukuthi ubhalise bese udlala e-Tangiers Casino
I-PC / Mac ene-Windows, i-OS X noma i-Linux OR
Idivayisi yeselula noma i-tablet enesofthiwe yakamuva ye-Android noma ye-iOS
Ukuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo (kuncanyelwe i-4G noma i-WiFi)
Ungasebenzisa i-PC / i-laptop noma i-smartphone / i-tablet ukudala i-akhawunti e-Tangiers Casino
Siphakamisa ukuthi usebenzise iziphequluli ze-Chrome noma ze-Safari ukufinyelela ikhasino• Chofoza noma uthinte inkinobho eluhlaza ethi “Ngena Ngemvume” phezulu ngakwesokudla ekhasini lasekhaya
Ifomu lizovela futhi kufanele ugcwalise eminye imininingwane ngawe:
Sicela uqinisekise ukuthi uhlinzeka ngolwazi olunembile- uma kungenjalo ubhekana nezinkinga lapho ikhasino yenza ukuqinisekiswa komsebenzisi!
Uma usuligcwalise ifomu, yamukela imigomo yekhasino bese uqedela ukubhalisa ngokucindezela inkinobho yokubhalisa
Qhubeka uhlole i-imeyili yakho ukuthola i-imeyili yokuqinisekisa.
Chofoza isixhumanisi esitholakala kule imeyili ukuqedela ukubhalisa kwakho.
I-akhawunti yakho izosebenza futhi ungaqhubeka wenze idiphozithi yakho yokuqala bese uthatha ibhonasi yakho
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Tangiers Casino
I-Tangiers Casino ixhumane nabahlinzeki abaphezulu abanjenge-Rival, i-Habanero, i-Microgaming, i-Vivo Gaming ne-Betsoft ukubala abambalwa. Kunemidlalo engaphezulu kwengu-600 ongakhetha kuyo futhi abaklami benze umsebenzi omuhle ngokuyihlukanise ngezigaba ezahlukahlukene ukuze ifinyeleleke kalula.
Abadlali bazothola imidlalo ezigabeni ezilandelayo: ama-Slots, ama-Slots Akudala, i-Poker Yevidiyo, Imidlalo Yethebula kanye Nemidlalo Yasekhasinoekhasino Ebukhoma. Chofoza isigaba ofisa ukusidlala futhi uzothola uhlu lwemidlalo etholakalayo. Awudingi ukudawuniloda noma iyiphi isofthiwe yekhasino ukuze udlale le midlalo ngoba yonke imidlalo yimidlalo esheshayo (instant play). Kunemidlalo embalwa ye-jackpot ekhula njalo (progressive jackpot) etholakala e-Tangiers Casino kodwa ayifakwanga ezigabeni ezihlukile. Ngakho-ke uma uthanda ukudlala imidlalo ye-jackpot ekhula njalo, bhekisisa ngenkathi ukhetha imidlalo eminingi.
Ama-slots e-inthanethi yimidlalo ethandwa kakhulu emakhasino e-inthanethi futhi nakho kuyafana e-Tangiers Casino. Abadlali baseNingizimu Afrika bathanda ukudlala imidlalo yama-slot e-inthanethi njengoba ingadingi isu, incike enhlanhleni ngokuphelele futhi inikeza abadlali izingqikithi ezihlukile nezithandekayo ongakhetha kuzo.
Uma ungomunye wabadlali be-slot yakudala, yiya ngqo kusigaba sama-slots akudala. Lapha uzothola imidlalo efana ne-Fandango’s, i-Russian Attack, i-Big Bang, i-Lucky Seven kanye ne-Black Diamond. Le midlalo ayinzima ukuyidlala, inama-reel angu-1 kuya kwangu-3 ngokuvamile futhi inezindikimba ezilula.
Uma ungomunye wabadlali be-slot banamuhla, uzobe ubheka izingqikithi ezahlukahlukene, ama-reel amaningi nezici ezikhethekile. Isigaba se-slot sizonikeza imidlalo emihle. Eminye yale midlalo yi-Blood Eternal, i-Madder Scientist, i-At The Movies, i-Heist, i-Total Overdrive, i-The Tourist kanye ne-Puppy Love Plus.
Abantu baseNingizimu Afrika bathanda ukuya kumakhasino ezakhiweni ngobusuku benjabulo nokudlala imidlalo yasetafuleni yakudala. Kodwa-ke, ukuya ekhasino esesakhiweni kungase kube yinto echitha isikhathi futhi ebiza kakhulu uma ubheka zonke izindleko. Ungadlala imidlalo yetafula yakudala e-Tangiers Casino ngokuchofoza esigabeni Semidlalo Yetafula.
Kunemidlalo yetafula embalwa ongayikhetha lapha kodwa yanele nje ukukugcina umatasa. Eminye yemidlalo yetafula etholakala lapha ibandakanya i-Pontoon, i-Common Draw Roulette kanye ne-American Blackjack.
Imidlalo Yasekhasino Ebukhona
Uma ngasizathu simbe uzithola ukhathele ngoukudlala imidlalo yasekhasino ye-inthanethi, shintshela kumdayisi wasekhasino obukhoma. Uthola ithuba lokuxhumana nekhasino yomdayisi obukhoma kanye nabanye abadlali nabo abadlala imidlalo yasekhasino bukhoma. Qiniseka ukuthi unokuxhumeka okuqinile kwe-inthanethi njengoba le midlalo isakazwa bukhoma.
Eminye yemidlalo yasekhasino yomdayisi obukhoma enikezwa e-Tangiers Casino ibandakanya i-Live Roulette, i-Princess Roulette, i-Blackjack VIP, kanye ne-English VIP Roulette.
Ingabe i-Tangiers Casino Iyatholakala Yini Kuselula
I-Tangiers Casino ineminyaka engamashumi amabili ikhona ngoba ikhasino isebenzise ubuchwepheshe bamuva ukuhlala isesikhathini samanje. Ngeke uthole i-app ye-Tangiers Casino ebhekele amaselula. Kodwa-ke, ungasebenzisa amadivayisi akho e-Android, e-Windows kanye ne-iOS ukufinyelela ikhasino ye-inthanethi.
Okufanele ukwenze nje ukuvula isiphequluli seselula yakho, thayipha i-URL yekhasino, beseuzokwazi ukufinyelela ngokugcwele ekhasino. Uma ungumsebenzisi omusha ofinyelela kumakhasino eselula, uzokwazi ukubhalisela i-akhawunti, uxhumanise imininingwane yakho yezezimali bese uthatha amabhonasi akhethekile ngedivayisi yakho yeselula.
Kuyasiza ukuba namadivayisi eselula kanye nama-smartphone akamuva lapho udlala imidlalo yasekhasino yeselula. Kodwa-ke, noma ngabe unedivayisi endala, qinisekisa ukuthi unesofthiwe yakamuva ukwenza isipiliyoni sakho sokudlala sibe bushelezi.
Ngingayidawuniloda Yini i-TangiersCasino Kuselula Yami?
Ngenkathi iningi lamakhasino amadala evame ukuba nesofthiwe yekhasino ongayidawuniloda, i-Tangiers Casino ayinaso leso sici. Ikhasino ye-inthanethi yakhiwewe nge-HTML5 futhi yonke imidlalo yayo iyatholakala kumodi yokushesha ukudlala (instant play). Lokhu kusho ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokudawuniloda nokufaka noma iyiphi isofthiwe.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Tangiers Casino
Wire Transfer Yebo Izinsuku -7
Visa Cha NA
Bitcoin Cha NA
Skrill Cha NA
Neteller Cha NA
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Tangiers Casino
Isungulwe: 2001 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: Celicorp Limited Umphathi ngu: Celicorp Limited I-imeyili: [email protected]
Ubuhle Nobubi be-Tangiers Casino
Yini Eyenza Ukuthi I-Tangiers Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
Ngokuya ngencazelo yethu engenhla, kulula ukubona ukuthi i-Tangiers Casino iyikhasino efanele abadlali emhlabeni wonke. Kodwa-ke, ibaluleke kakhulu kubadlali baseNingizimu Afrika ngezizathu ezilandelayo.
Ayikho imikhawulo ebekelwe abadlali baseNingizimu Afrika
Inqwaba lamabhonasi atholakalayo
Enye yamabhonasi okukwamukela angcono kakhulu yabadlali baseNingizimu Afrika
Izikhalo nge-Tangiers Casino South Africa
I-Tangiers Casino ineminyaka ecishe ibe ngamashumi amabili futhi unedumela eliqinile emakethe. Ngokuya ngokubuyekezwa kwethu kwemakethe yaseNingizimu Afrika, azikho izibuyekezo eziningi ezingezinhle. Izikhalo ezimbalwa esizitholile bekungabadlali abakhononda ngokuthi usizo lwamakhasimende olutholakala ku-imeyili luthathe ngaphezu kwamahora angu-24 ukubaphendule futhi abalwa babo abaziqedanga izimfuneko zokukhipha imali.
Indlela engcono yokulungisa lezi zinkinga ukuqaphela lokho okunikezwa yi-Tangiers Casino. Ngakho-ke uma ungatholi impendulo nge-imeyili emahoreni angu-24, vula ingxoxo ebukhoma okuyindlela engcono yokuthola impendulo esheshayo.
Uma kuziwa ekukhipheni imali, qinisekisa ukuthi uqedela ukuqinisekiswa kwe-akhawunti yakho ngaphambi kokuzama ukukhipha imali. Uma ufake imininingwane enembile ngesikhathi senqubo yokubhalisa i-akhawunti yakho, okumele ukwenze ukuhlinzeka nge-ID yesithombe kanye nedokhumenti yokuqinisekisa ikheli lakho bese ungabi nenkinga.
Futhi qinisekisa ukuthi uqeda zonke izidingo zokubheja ngaphambi kokuzama ukukhipha imali. Ukwehluleka ukwenza lokho kuzokuvimbela ekufinyeleleni ezimalini zakho futhi kungamisa ne-akhawunti yakho. Kungakho siphakamisa ukuthi abadlali bathathe imizuzu embalwa ukufunda imigomo nemibandela ngokucophelela ukuze uthole okuningi kwebhonasi yayo futhi ugweme noma yiziphi izinkinga ngesikhathi sokukhipha imali.
Ingabe i-Tangiers Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Umthetho wemidlalo wase Ningizimu Afrika awuvumeli u-Opharetha wekhasino ye-inthanethi ukuba neHhovisi eNingizimu Afrika nokuthi anikele ngamasevisi emidlalo ye-inthanethi. Kodwa-ke, awukho umthetho omelene nabo-opharetha bemidlalo baphesheya yingakho i-Tangiers Casino inganikela ngamsevisi emidlalo ye-inthanethi yase mthethweni eNingizimu Afrika.
Ngiluvikela kanjani ulwazi ngami e-Tangiers Casino?
Indlela engcono yokugcina ulwazi lwako lomuntu siqu nolwezimali luphephile ukusebnzisa ama-Bitcoin. Kodwa-ke noma ngabe uthatha isinqumo sokusebezisa imali yangempela ukudlala, ungaqiniseka ukuthi ulwazi ngaweluphephile. Lokhu kungenxa yokuthi i-Tangiers Casino isebenzisa ubuchwepheshe bamuva be SSL ukugcina imininingwane yomuntu siqu neyezimali yabadlali bayo iphephile ngaso sonke isikhathi. I-Tangiers Casino iphinde ithe ngeke ikhokhise ngaphansi kwegama layo, ngakho-ke akudungeki ukhathazeka uma i-Tangiers Casino ivela kukhadi lakho lwesikweleti noma esitatimendini sebhange.
Yini inzuzo yokusebenzisa i-bitcoin e-Tangiers Casino?
I-Bitcoin ivumela abadlali ukuthi bagcine ulwazi lwabo lomuntu siqu luyimfihlo ngakho-ke ayikho imininingwane yemali yangempela efana nekhadi lwesikweleti, noma imininingwane yasebahnge edinga ukufakwa e-Tangiers Casino. Enye inzuzo yokusebenzisa i-Bitcoin ukuthi kunebhonasi yokwamukela enkulu futhi engcono enikzwa abadlali kuwo wonke amadiphozithi abo amathathu okuqala abawenza nge-Bitcoin.
Ngingadlala yini ngenye imali ngaphandle kwe-ZAR?
I-Tangier Casino isekela izimali eziningi ezibandakanya i-CAD, i-EUR, i-AUD ne-ZAR. Ngokuqinusekile ungadlala ngenye imali uma ufuna, ikakhulukazi uma usebenzisa i-Bitcoin. Kodwa ke uma ucabanga ukusebenzisa imali yakwa manye amazwe, lungela ukukhokha imali eyengeziwe yokushintsha imali. Yingakho i-ZAR iyindlela engcono kakhulu kubdlali base Ningizimu Afrika abafuna ukusebenzisa imali ye-Fiat.
Ingabe i-Tangiers Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Okwamanje i-Tangiers Casino ayinayo i-SportsBook. Kunama Slots e-inthanethi, imidlalo yetafula, imdilalo yesekhasini yomdayisi, obukhoa nemidlalo embalwa ye-Jackpot ekhula njalo(Progressive Jackpot) kuphela.
Yini okufanele ngiyenze uma Ibhonasi Yokukwamukela ingakafiki ku-akhawunti yami?
I-Tangiers Casino iklanywe ukuthi ibhonasi yokukwamukela ingene ku-akhawunti yakho ngokuzenzakalela. Lokhu kuvame ukwenzeka emizuzwini embalwa ngemuva kwediphozithi yakho yokuqala. Sisikisela ukuthi uvule kabusha ikhasi noma uphume ku-akhawunti yakho bese ungena ngemvume futhi ukuhlola isimo se-akhawunti yakho. Ayikho ikhodi yebhonasi edingekayo lapha.
Kepha uma ibhonasi yokwamukela ingafiki ku akhawunti yakho ngemuva kokwenza okungenhla, thinta usizo lwamakhasimende lwenxoxo ebukhoma futhi bazkusiza.